Xai Yak Techonology: SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု
SQL Injection သို့မဟုတ် Hacker တွေရဲ့ တိုက်ကွက်ဆန်းတစ်ခု
အရင်ဘလော့မှာနဲ့ MMITD မှာ တင်ဖူးပါတယ်
ခု မသိသူတွေအတွက် ထပ်မံတင်ပေးတာပါ
Injection နဲ့ပက်သက်တဲ့အပိုင်းကို အတွေ့အကြုံ မရင့်ကျက်သေးတဲ့သူတွေ၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးတဲ့သူတွေပါ နားလည်နိုင်အောင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်နဲ့ နဲနဲလောက် Tutorial တစ်ခုအဖြင့်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ SQL injectiong နဲ့ပက်သက်တဲ့ Tutorial တွေကို Google မှာ ရှာကြည့်လိုက်ပါက တောင်လိုပုံနေပါတယ်။ အားလုံးကတော့ အတူတူပါပဲ... SQL injector တွေဖြစ်စေရန်တစ်ခုအတွက်မဟုတ်ပဲ SQL Injection နဲ့အတူ php နဲ့ mysql functions လေးတွေကို သိကာ security ပိုင်းကို ထိန်းသိန်းကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ Computer ဝေါဟာရကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရတာ နဲနဲတော့ နားရှုပ်သွားနိုင်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။ SQL Injection ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ အခြေခံ Web Developement ပိုင်းအခြေခံရှိဖုိ့တော့လိုပါလိမ့်မယ်.. ဒီ tutorial အတွက် လိုအပ်တာကတော့ php နဲ့ sql အကြောင်းသိထားရင် နားလည်လောက်ပါတယ်။
Site တွေမှာ username, password တွေနဲ့ login ၀င်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ site အထဲမှာ ရှိတဲ့ content တွေကို မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သူ (username & password ရှိထားတဲ့သူ) တွေကိုသာ ကြည့်ရှုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာပါ။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေက username & password မရှိပဲ ရှိသကဲ့သို့ ၀င်ရောက်အသုံးပြုမယ် (user registration မလုပ်ပဲ ၀င်ရောက်တယ်) ဆိုရင် ဒါကို BYPASSING LOGINS လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ programmer ရဲ့ login မှာစီစစ်မှု မသေချာလို့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ User name နဲ့ Password ကိုမသိပဲ login ၀င်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် username က admin ဖြစ်ပြီး password က 12345 ဆိုကြပါစို့... ဒါဆိုရင် SQL query က
SELECT USER from database WHERE username='admin' AND password='12345' ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..... အကယ်၍ အပေါ် SELECT command တန်ဖိုးက မှန်တယ်ဆိုရင် site ထဲကို ၀င်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အထက်ပါပြောခဲ့သလို programmer က login မှာမှန်ကန်တဲ့စီစစ်မှုမရှိရင် Hacker တွေက အောက်ပါအတိုင်း ၀င်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
SQL query မှာတော့
ဒါက comment operator ပါ အဲ့လိုပဲ အခြား comment operator က /* ဖြစ်ပါတယ်။
---အားနည်းချက် အမှားများ ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း---
id variable assign လုပ်ထားတဲ့ နောက်နားက ' (apostrophe) လေးတစ်ခုကို ထည့်လိုက်ပါမယ်..
အကယ်၍ ၄င်းရဲ့ site က vulnerable မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ပုံမှန်အတိုင်း page loading လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်..
အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ query string filtering မရှိဘူးဆိုရင် "MySQL Syntax Error By '5'' In Article.php on line 15." သိုမဟုတ် Check the correct MySQL version သို့မဟုတ် MySQL Fetch error သို့မဟုတ်ပါက ဘာမှမပေါ်ပဲ page အဖြူကြီးသာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်... ဒါဆိုရင် ဒီ site က vulnerable ဖြစ်နေပါတယ် အကယ်၍ ' ဖြင့် မရလျှင် အောက်ပါအတိုင်း union select 1-- ဆိုတာကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
In ASP ==>>
ဆိုရင် နောက်က ' (apostrophe) လေးထည့်ပြီးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဆိုတဲ့ error မျိုးပေါ်နေတတ်ပြီး ASP, JSP, CGI, နဲ့ PHP web pages တွေမှာ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ URL မှာ မပေါ်တဲ့ parameters မျိုးဆိုရင် ၄င်းတို့ရဲ့ login page, search page, feedback လိုနေရာမျိုးတွေက ရှာနိုင်ပါတယ်.. တစ်ချို့ html page တွေက POST command နဲ့ ASP page ကို ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ parameters သုံးထားတတ်ပါတယ်.. ဒါဆိုရင်တော့ ၄င်းတို့ရဲ့ HTML source code ထဲကို ၀င်ရောက်ပါ။ ပြီးရင် "FORM" tag ကိုရှာလိုက်ပါ ... ဥပမာ
span class="tags">FORM action=Search/search.asp method=post>
span class="tags">input type=hidden name=A value=C>
ဒီ span class="tags">FORM>span class="tags">/FORM> နှစ်ခုကြားက ဖြစ်နိုင်ခြေတွေပါ။
span class="tags">FORM action=http://duck/Search/search.asp method=post>
span class="tags">input type=hidden name=A value='a' or 1=1--">
‘order by’ ကိုအသုံးပြုပြီး Columns များကို ရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်..
URL query ကိုအောက်ပါတိုင်း ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်... '/*' သို့မဟုတ် '--" ဆိုတာလေးသုံးလို့ရပါတယ်..
ယခုအချိန်အထိ အမှားမပေါ်သေးဘူးဆိုရင် နောက်တစ် ထပ်ပြီးတိုးပါမယ်.. ဒီလိုတိုးတိုးပြီး အမှားပေါ်လာတဲ့အထိ ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အခု3ကိုရောက်တဲ့အခါ အမှားတွေ့တယ်ဆိုရင်
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Columns နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ... ဒီလိုနည်းနဲ့ Column တွေကို တစ်ဆင့်ခြင်းရှာဖွေရပါတယ်...
http://sbisa.org/circle.php?id=26 ရဲ့ value နောက်မှာ ' ဆိုတဲ့ (apostrophe) တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်..
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is notavalid MySQL result resource in /home/sbisaor/public_html/circle.php on line 10 ဆိုတဲ့ error တစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်..
7 အထိရောက်တဲ့အခါမှာတော့ error တွေ့တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ6Columns ရှိတယ်..
ဒီ Injection မှာ MySQL Version ကို checking လုပ်ဖို့လိုပါတယ်... . Version အား Checking လုပ်ရန် @@version သို့မဟုတ် version() functions တွေကိုသုံးပေးရပါမယ်..
အခု @@version ကို data တွေသိမ်းဆည်းထားတဲ့ column မှာထည့်ပြီး MySQL version ကိုစစ်မယ်..
အကယ်၍ user တို့ ၊ database တို့ကို check ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါတိုင်း checking လုပ်နိုင်ပါတယ်..
--MySQL5နှင့်အထက် injection---
Columns တွေကိုရယူရန် column_name from information_schema.columns ဆိုတာကိုသုံးရပါမယ်..
နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီ site အပေါ်မှာ မြင်ရအောင်လို့ group_concat(table_name) ကို Tables တွေအတွက်နဲ့
group_concat(column_name) ကို Columns တွေအတွက်သုံးပေးရပါတယ်...
ဒါဆိုရင် DB ထဲက table တွေကို ဖော်ပြပေးပါပြီ... အခု ကျွန်တော်တုိ့ဒီ tables လေးတွေကို စနစ်တကျ မှတ်သားထားပါမယ်... နောက်တစ်ဆင့်တက်ကာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ user name နဲ့ password တွေ သိမ်းထားတဲ့ table ကိုကြည့်ပါမယ်...
group_concat ကိုပဲ ဆက်လက်သုံးပါမယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ username, password တွေသိမ်းထားလောက်တဲ့ columns တွေထဲက စစ်ထုတ်ယူမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ မှန်းထားတဲ့ table အမည်ကို from information_schema.tables where table_schema=database-- နေရာမှာ ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်..
http://sbisa.org/circle.php?id=-26 union select all 1,2,3,group_concat(username,0x3a,password),5,6 from admin--
ဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ username နဲ့ password ကိုရသွားပါပြီ... ရရှိထားတဲ့ password ဟာ plaintext ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ထပ်ပြီးခေါင်းရှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့
တစ်ချို့ကတော့ password hashed လုပ်ထားတဲ့ အတွက် ၄င်းတို့အား hash cracker တွေနဲ့ ဖြေထုတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်..
Admin Panel Finder http://www.planetcreator.net/planetcreator/adminpanelfinder/ နဲ့ရှာနိုင်ပါတယ်။
(table name နဲ့ column တွေက အထက်ပါအတိုင်းရှာဖွေက ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်)
အောက်ပါအတိုင်း site ကိုပြင်ပေးသွားပါမယ်...
ဒီတစ်ခုကတော့ DROP TABLE ပါ... Table အလိုက် ဖျက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ DROP Table နဲ့ table name ကိုဆိုပြီးသုံးပါမယ်...
Server အထဲက .htaccess, .htpasswd တွေနဲ့ password files တွေဖြစ်တဲ့ etc/passwd စသည့် ဖိုင်တွေကို ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ LOADFILE ကိုသုံးရပါတယ်... ဒါကအသုံးတော့နည်းပါတယ်....
* SELECT LOAD_FILE(0x633A5C626F6F742E696E69)
ဒါဟာ server ရဲ့ c:\_boot.ini ကို ဆွဲယူပေးပါလိမ့်မယ်..
MySQL version5နဲ့အထက်မှာ mysql.user ဆိုတဲ့ table တစ်ခုဟာ MySQL servers တွေမှာရှိပါတယ်... အထဲမှာ hash လုပ်ထားတဲ့ Password နဲ့ username တွေပါဝင်ပါတယ်... ၄င်းအထဲက
hash ဟာ mysqlsha1 ဖြစ်တဲ့အတွက် John The Ripper နဲ့ crack လုပ်ဖို့ခက်ပါမယ်..
SQL Injection မှာ အသုံးပြုတဲ့ အခြေခံတွေပဲ ရှိပါသေးတယ်... ဒီထက်များတဲ့ functions တွေအများကြီးရှိသလို ဒီထက်ပိုပြီးနက်နဲတဲ့ အသုံးပြုပုံတွေရှိပါတယ်... လေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် SQL commands တွေကို အရင်ဆုံး ကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ SQL commands အသုံးပြုမှုအရည်အချင်းကို မြင့်တင်သင့်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 10:58